Charmlite abanyela Canton Fair nke 127 mepere site na 15n, June ma na-agwụ na 24n, June. Ọ pụrụ iche ọfụma n’ihi na Canton Fair, nke a makwaara dị ka China Import and Export Fair, ka a bugara n’igwe ojii na nke izizi ya kemgbe mmalite ya n’afọ 63 gara aga.
Maka emume a, Charmlite kwadebere nkuzi vidiyo Bekee maka ngwaahịa ọhụrụ, na-enye nkwanye ndụ mgbe niile ma na-eji teknụzụ eziokwu ndị mepere emepe gosipụta ngwongwo iji dọta ndị ọbịa na nnọkọ ngosi a nke mbụ.
Ndị ahịa ọhụụ sitere na mba dịka Russia, Germany, Mexico, Turkey na ect nwere nnukwu ike maka ngwaahịa anyị dị elu. Charmlite nwere ụlọ ọrụ aka anyị nke nwere BSCI, Disney Fama, BSCI, nyocha akwụkwọ ọrụ CFA, ma nwee azụmahịa na ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ, Coca cola, Fanta, Pepsi, Disney, nwekwara Bacardi. Lee, anyị gosipụtara gị ụfọdụ eserese dị n'okpuru ebe a nwere atụmatụ asọmpi, àgwà na ọnụahịa ndị ọzọ, dịka iko yad otu, iko mmanya, iko mmiri, iko PP, iko kọfị na ụlọ akụ. Ha kwesịrị inweta nnabata dị mma n'ahịa gị ma nyere gị aka ịmalite azụmahịa gị.
Charmlite gara Mgbakọ Canton nke 127 dị na ntanetị abụghị naanị ihe dị mkpa iji gboo nsogbu ndị COVID-19 wetara, kama ọ na-egosikwa mkpebi siri ike nke Charmlite imezi azụmahịa anyị niile.
N'iji teknụzụ ozi zuru ezu gụnyere ịntanetị, nnukwu data, igwe ojii na ọgụgụ isi, Canton Fair gosipụtara ụzọ nkwalite ọhụụ maka ụlọ ọrụ ndị si mba ọzọ na ụlọ na mmụọ siri ike ịchọta ohere n'ime ihe ịma aka.
Iji mee ka nghọta gị ka mma banyere Charmlite, biko chọta foto ụlọ ntu na afọ gara aga maka ncheta.
Anyị ji obi anyị niile nwee olile anya na gị ga-anọnyere anyị! Ka anyi megharia Ngwa ahia ndi ozo!